प्लटिङ, सेटिङ र डेटिङ ! - Jhilko
प्लटिङ, सेटिङ र डेटिङ !
चीन यतिखेर कोरोना भाइरससँग लडिरहेको छ । यो भाइरसले चीनलाई मात्र होइन विश्व स्वास्थ्यलाई नै हावाकावा बनाउँदै लगेको छ । यता नेपालमा भने डबल नेकपालाइ प्लटिङ, सेटिङ र डेटिङ नामको भाइरसले आक्रान्त बनाएको छ । यो भाइरसले कतै पूरै पार्टीलाई गाँज्ने हो कि भन्ने त्राहीमाम छ ।
नेपालीमा एउटा उखान छ, बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो कि भनेर डराउनु पर्छ रे ! यहाँ यी तीन भाइरसले आक्रान्त बनाएर नेकपाका उपल्ला दर्जाका केही नेताको राजनैतिक इहलिला समाप्त पर्यो भनेर खुच्चिङ गर्ने अवस्था अब रहेन । यो त भाइरस सरह महामारीको रुपमा फैलदै गएको छ । बेलैमा हेक्का राखिएन भने यसले गाउँटोलसम्म नै गाँज्ने निश्चित छ । यहाँ तीनै भाइरसको विषयमा सबिस्तार व्याख्या गरिनेछ ।
यो भाइरसले नेकपाका बडेमानका नेतासम्मलाइ छोडेन । बडा नेताहरुलाई यसले बालुवाटारमा पु¥याएर मृगतृष्णामा बाँच्न विवस गराएको भर्खरैको घटना हो । नेताजीहरुले आफ्नो शान, सौकत र ऐश्वर्यलाई उजिल्याउन प्लटिङ व्यवसायलाई आत्मसात गरे । ललिता निवास नामको त्यो परम्परागत भूतपूर्व भाइरस प्लटिङ नामको वर्तमान भाइरसमा रुपान्तरण भएको पत्तै पाएनन् । जतिखेर पत्तो पाए त्यतिखेर यिनले अनेक बहानाबाजी गरेर भाइरस नलागेको आफैलाइ ढाँट्दै आए । त्रिताल डाइग्नोसिसबाट जब पत्ता लाग्यो कि नेताजीसंगै झण्डै दुई सय जनालाइ यो भाइरस सरेको कुरो आयो तबमात्र होसहवासमा आए हुनन । यो भाइरस नियन्त्रण भएन भने यसले टोलसम्म आक्रान्त पार्ने निश्चित झैं छ ।
यो भाइरसको खोप आजसम्म आएको छैन । सायद आउँदैन पनि होला । जबसम्म मानिसहरुले घरजग्गा जोड्ने काम जारी राख्नेछन तबसम्म यो भाइरस नियन्त्रण होला जस्तो छैन, उन्मुलन हुने त कुरै भएन ।
यो दोस्रो प्रकारको भाइरस हो । यो भाइरसले यतिखेर नेकपा सरकारको उपल्लो हिस्सालाइ नै असर गरेको कुरा बाहिर आइसकेको छ । यो खतरनाकमध्येको डेन्जर भाइरस हो । सरकारका प्रवक्ताको राजनैतिक यात्रालाई नै यसले विश्राम लगाइ दिएको छ । यो भाइरस थाहा नहुन्जेल केही पनि हुन्न । तर यो भाइरस कहीँबाट चुहियो भने बस यसले सम्धी समेत भन्दैन । छोरा, छोरी, बुहारीे केही पनि भन्दैन भन्ने कुरो हालै प्रमाणित भएको छ । विजय मिश्र नामका पात्रले यो भाइरसको डाइग्नोसिस गरेका हुन । उनी यदि नहुँदा हुन त यो भाइरसको अत्तोपत्तो हुँदैन थियो । यति होल्डिङ्सबाट सुरु भएको यो सेटिङ भाइरस सुरक्षण मुद्रणमा आइपुगेर पटाक्षेप भएको छ । यो भाइरसको डाइग्नोसिस थुतुनोबाट गरिन्छ । थुतुनो चलाएन भने यो भाइरसको डाइग्नोशिस गर्न साह्रो पर्छ । नेताको थुतुनो चेक गर्यो भने सेटिङ भाइरस कसमा छ भन्ने स्वतः पत्ता लाग्छ ।
यसअघि थाहा नहुँदा यो भाइरस नेपाली राजनीतिमा एण्टी भाइरसको रुपमा थियो । यो भाइरसले देशको आर्थिक इहलीला समाप्त गर्दै आएको छ भने व्यक्तिलाई यसले अब्बानी बनाउँदै आएको छ । यो भाइरसको खोप निस्केको धेरै भइसकेको छ । जसलाई जनदण्ड खोप नाम दिइएको छ । माओवादी विद्रोह ताका ‘भाटा’ भन्ने नामको खोप पनि आएको थियो । त्यतिखेर यस्तो भाइरस लागेकाहरुलाई भाटा हानेर ठीक पार्ने चलन थियो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि यो खोपको उत्पादन हुन छाडेको छ । भाटा हान्ने कतिपय नै यस्तो सेटिङमा परेका छन् । यसैले आजभोलि यो भाइरस पुन ः सक्रिय हुन थालेका छ ।
यो अर्को खतरनाक प्रकारको डेन्जर भाइरस हो । थुतुनो चलाउँदा सेटिङ भाइरसमा फसिन्छ भने डेटिङ भाइरस मु.... अर्थात गोप्य अंग नजोगाउँदा फस्ने डर हुन्छ । यो भाइरसले सम्माननीयलाई पनि छोड्दैन, छोडेन भन्ने बुझ्नुस । आजभोलि यो भाइरस जताततै सलह झैं लाग्ने सम्भावना छ । मिटु भन्ने यसको प्रारम्भिक लक्षण हो । मिटु हुँदै अनेकान दोहोरी, तेहरी, डान्सबार, खोल्साखोल्सी चाहार्दा यो भाइरस लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यो भाइरसको खोपको नाम ‘नैतिकता’ हो ।
नेपाली उखान थु.... र मुुु....जोगायो भने माथिका दुई भाइरस छेउ लाग्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
समाजवादीको सत्ता बहिर्गमनसँगै राजपा–समाजवादीबीच जुहारी
समाजवादी पार्टीको सत्ता बहिर्गमनको बिषयलाई लिएर सत्तारुढ नेकपा, नेपाली काँग्रेस...
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण फैलिन नदिन नेपाल र भारत दुबै देशले नेपाल–भारत...
बारको अध्यक्षमा चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिवमा लीलामणि पौडेल...
कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनको अध्यक्षमा प्रगतिशील, पेशागत...